Lapha ukopha ekatini lethu | Amakati kaNoti
Njengoba sonke sesivele sazi, futhi ikakhulukazi thina esinamakati, lezi zinhlobo zezilwane zivame ukufuna ukwazi, ngakho-ke kwezinye izikhathi, zingagcina zingena enkingeni zigcine zilimele noma ngohlobo oluthile lokusikwa oluqala ukuphuma igazi ngokumangazayo nangokuthusayo.
Noma ngokuvamile, amanxeba ukuthi isilwane sethu esincane singasithola lapho sisuka ekhaya, futhi ukuxhumana nezinye izilwane, kungaphezulu, futhi akudingi ukunakekelwa kwezilwane, kubalulekile ukuthi sifunde ezinye zezici ukuze sikwazi ukuzihlanza nokuzinakekela, ukuze ungagcini ukutheleleka noma ukwenza inkinga.
Uma siqaphela ukuthi ikati lethu selinqunyiwe futhi likunikeza uakukho ukopha, kepha isilonda asijule kakhulu, akudingeki sigijimele kudokotela wezilwane, kepha thina ngokwethu singakunakekela ukwelashwa kwesilwane sethu. Vele, ngincoma ukuthi ulandele ezinye izinyathelo futhi ubheke izinyathelo ezithile, njengokuhlanza inxeba kahle nge-gauze efakwe ku-saline womzimba, bese uqhubeka nokusika izinwele ezungeze isilonda bese usebenzisa i-antiseptic emnene engabangeli ukushisa .
Ngemuva kokwenza lokhu, ngincoma ukuthi ufake i-petroleum jelly encane, ikakhulukazi emaphethelweni enxeba, ukuvimbela ezinye izinwele ukuthi zingawi lapho, zibangele ukutheleleka nobuhlungu. Uma ubona ukuthi isilwane sakho esincane siqala ukopha kakhulu, kufanele uzame yeka ukopha, ukwenza ingcindezi ethile endaweni lapho kusikwe khona, kepha uma ukuphuma kwegazi kunganqamuki, ngincoma ukuthi uyise ngokushesha kudokotela wezilwane uyohlolwa.
para yeka ukopha noma ukopha, kufanele umboze isilonda ngephedi yokulinganisa efakwe emanzini abandayo bese ufaka ingcindezi encane. Uma ngaphandle kwalo mzamo, ukuphuma kwegazi kunganqamuki, kufanele uvikele i-gauze ngohlobo oluthile lwebhandishi bese ubeka elinye iphedi le-gauze ngaphezulu. Ukuqinisa ibhandishi, kunconywa ukuthi ubeke enye ezungeze iphedi yesibili.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Curiosities » Yelapha ukopha ekati lethu